wellies နှင့်အတူကြည့်ရှုသည်: သင့်ရဲ့စတိုင်မိုrain်းရွာစေဖို့စိတ်ကူးများ | စတိုင်လ်အမျိုးသားများ
မင်းရဲ့ရုပ်သွင်ကိုကျန်းမာစွာနဲ့ရှင်သန်နေဆဲလား။ စတိုင်ကျတဲ့လူတစ်ယောက်ဟာအချိန်တိုင်းအတွက်ခိုင်မာသောအရင်းအမြစ်တွေရှိရမယ်။ ဟုတ်ကဲ့၊ သူတို့ဟာအပျော်ရွှင်ဆုံးမဟုတ်ပေမယ့်မိုးရာသီလည်းပါ ၀ င်ပါတယ်။
Wellies သည်ရှုပ်ထွေးဆုံးဖိနပ်မဟုတ်သော်လည်း၎င်းတို့သည်စတိုင်နှင့်မကိုက်ညီပါ။ ပြီးတော့မိုးရွာတဲ့နိုင်ငံတွေမှာသူတို့သိတယ်။ အောက်ဖော်ပြပါအကြံဥာဏ်များနှင့်အကြံဥာဏ်များကသင်၏ရေတွင်းများနှင့်အတူလိုက်ပါရန်ကောင်းသောအစီအစဉ်ရှိရန်ကူညီလိမ့်မည်:
1 wellies ဝတ်ဆင်ရန်ဘယ်အချိန်မှာ
Wellies ကိုသဘာဝအရလှုပ်ရှားမှုများနှင့်မြို့ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်အသုံးပြုသည်။ သူတို့ကိုမြို့ထဲမှာသုံးတဲ့အခါမိုးသို့မဟုတ်ဆီးနှင်းလိုအပ်သည်။ ရာသီဥတုသာယာသည်နှင့်အမျှဖိနပ်သည်အအောင်မြင်ဆုံးဖြစ်သည်။
သင်၏ wellies ကိုအသုံးပြုရန်နောက်တစ်ကြိမ်မှာဂီတပွဲတော်ဖြစ်သည်။ Glastonbury တွင်အကြီးမားဆုံးသောကျန်းမာရေးဌာနတစ်ခုမှာပျော်စရာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ တက်ရောက်လာသူများသည်ရွှံ့များပေါ်တွင်လမ်းလျှောက်နိုင်ရန်သူတို့၏အသွင်အပြင်တွင်ပါဝင်ရမည်။
စျေးကွက်သည်ရွေးချယ်စရာများစွာပေးထားသည်။ ရှိပါတယ် တတ်နိုင်ရေပိုင်နက် ထို့အပြင်ပိုမိုမြင့်မားသောအရည်အသွေးရှိသင့်သည်ဟုယူဆသောမြင့်မားသောစျေးနှုန်းများရှိသော wellies များ။ ရေနံများ၏စျေးနှုန်းသည်ထုတ်လုပ်သူပေါ် မူတည်၍ ယူရို ၁၀ မှ ၂၀၀ ကြားတွင်ရှိသည်.
ရှေးအကျဆုံးနှင့်ဂုဏ်အသရေအများဆုံးထုတ်လုပ်သူများထဲမှတစ် ဦး ဖြစ်သူ Hunter သည်၎င်း၏ကမ်းလှမ်းချက်များအပါအ ၀ င်ဒီဇိုင်းမျိုးစုံပါရှိသည် ချယ်လ်ဆီးစတိုင် wellies။ ကျန်းမာကြံ့ခိုင်မှုဟာစတိုင်မကျဘူးလို့ဘယ်သူပြောလဲ စျေးနှုန်းမြင့်မားသော်လည်း၎င်းသည်အထူးသဖြင့်သင်ခံနိုင်ရည်ရှိပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိသောအရာတစ်ခုကိုရှာဖွေနေလျှင်၎င်းသည်စဉ်းစားသင့်သောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ဟန်ဖြင့်စတိုင်လ်များဖြစ်သော်လည်းကျန်းမာကြံ့ခိုင်သောဖိနပ်များသည်အခြားဖိနပ်အမျိုးအစားများ (အထူးသဖြင့်အားကစားဖိနပ်) ကဲ့သို့မလင်းတစေရန်ဖြစ်သည်။ ရေတွင်းတစ်တွင်းရရှိရန်အကြောင်းပြချက်မှာဖိနပ်လိုအပ်လျှင်လိုအပ်သည့်အခါသင်၏ခြေထောက်ခြောက်သွေ့စေရန်ကူညီပေးသည်။ ဒီတော့ သူတို့ကိုသင်မေးရမယ်၊ သူတို့ကသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းကိုကောင်းကောင်းဖြည့်ဆည်းပေးတယ်၊.
Lacoste ကျဆုံးခြင်း / ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလ 2018-2019
Dsquared2 နွေ ဦး / နွေရာသီ 2010
A- အအေး - တံတိုင်းကျဆုံးခြင်း / ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလ 2018-2019
ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သကဲ့သို့, လမ်းဘေးစင်္ကြံပေါ်တွင်တွေ့မြင်သော wellies နှင့်အတူကြည့်၏နံပါတ်အတော်လေးသေးငယ်သည်။ သို့သော်ငြားလည်း, ဒီဇိုင်းပညာရှင်များ၏မူရင်းသည်သင့်အားသင်၏ရေတွင်းများကိုပေါင်းစပ်ရန်လိုအပ်သည့်လှုံ့ဆော်မှုကိုပေးနိုင်သည်။ Lacoste, Dsquared2 နှင့် A-Cold-Wall တို့သည်တစ်ချိန်တည်းမှာပင်သူတို့၏ဖိနပ်များကိုအမျိုးသားယောက်ျားများ၏စုဆောင်းမှုများကိုတင်ပြရန်ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။
ဒီဇိုင်းပုံစံပေါ် မူတည်၍ ဖိနပ်၏စတိုင်နှင့်၎င်းတို့ပေါင်းစပ်ပုံသည်များစွာပြောင်းလဲသည်။ လမ်းဘေးစင်္ကြံသွားတဲ့အခါမှာမိုးတွင်းစီးဘွတ်ဖိနပ်တွေ (တချို့ကဘောင်းဘီတွေအောက်မှာကျဲကျဲကျဲကျဲကျဲကျဲကျဲကျဲဖုံးအုပ်ထားပြီးတချို့ကတော့အဝတ်အစားများနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုး) နဲ့ပေါင်းစပ်ထားတယ်။: ဂျင်းဘောင်းဘီ၊ စားဆင်ယင်ဘောင်းဘီ၊ ချွေးထွက်များ၊ ရေပုံး ဦး ထုပ်များ၊ ဘေ့စ်ဘော ဦး ထုပ်များ ...
စံပြထီးသည်အခြားအပိုင်းများ၏စတိုင်ပေါ်တွင်မူတည်သည်ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးရွေးချယ်မှုကအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ သင်၏ပုံသဏ္isာန်သည်ပုံမှန်ဖြစ်ပါကသင်၏ထီးအတွက်မှောင်မိုက်သည့်အရောင်များသို့မဟုတ် plaid ကဲ့သို့သောဂန္ထဝင်ပုံနှိပ်ခြင်းကိုစဉ်းစားပါ။
အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ အကယ်၍ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးအဝတ်အစားသည်သင်၏စတိုင်လ်တွင်လွှမ်းမိုးနေလျှင်၊ ထီးကိုအရောင်ခြယ်။ ဖြစ်စေ၊ ပုံစံတစ်မျိုးတည်းဖြစ်စေကာမူအနည်းငယ်ရဲရင့်သောထီးကိုသုံးနိုင်သည်။
ရေတွင်းများနှင့်လှပသောအသွင်အပြင်ကိုဖန်တီးရာတွင်အသင့်တော်ဆုံးအပိုင်းမှာအင်္ကျီဖြစ်သည်။ကျန်အ ၀ တ်အထည်များသည်ပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်သည်။ ကွဲပြားခြားနားသောစတိုင်များနှင့်ရေစိမ့်ဝင်မှုဒီဂရီအမျိုးမျိုးရှိသည်။ ဂျာကင်အင်္ကျီနှင့်ပန်းခြံများသည်ကျပန်း ၀ တ်စားဆင်ယင်မှုတွင်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် ပိုမို၍ တရားဝင်ဝတ်စားဆင်ယင်ပါကစောင်ပါသည့်တုတ်ကျင်းများနှင့်အင်္ကျီများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။
ရေတွင်းများနှင့်ကျပန်းအဝတ်အစားများဝတ်ဆင်ရန်သင့်တော်သောမိုးရေအင်္ကျီလိုအပ်ပါသလား။ ကျပန်းများသည်သင်၏ပုံမှန်ကြည့်ရှုခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ ဒီအင်္ကျီအမျိုးအစားကို padded သို့မဟုတ်ပေါ့ပါးနိုင်ပါတယ်။
Parkas ဂျာကင်အင်္ကျီတစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်။ အပိုင်းပိုင်းနှစ်ခုစလုံးရဲ့အဓိကခြားနားချက်ကတော့၊ သူတို့တွင်ထည်ပိုများသောကြောင့် Parkas သည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်၏ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု (နှင့်သင့်အဝတ်အစားများ) ကိုဖုံးအုပ်ထားသည်။.
ဆောင်းပါးကိုကြည့်လိုက်ပါ ဦး ။ အမျိုးသားများ Parkas။ ဝယ်ယူသောအခါသင်အောင်မြင်ရန်လိုအပ်သည့်အရာအားလုံးကိုထိုနေရာတွင်တွေ့လိမ့်မည်။
သင်ပုံမှန်ဝတ်စားဆင်ယင်ပါကမိုးကာအင်္ကျီသည်မိုးအတွက်အကောင်းဆုံးကုတ်အင်္ကျီဖြစ်သည်။ သူတို့ကသူတို့ရဲ့အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်တဲ့ဖြတ်ကျေးဇူးတင်စကားအားဖြင့်ဝတ်စုံနှင့်အတူအလွန်ကြီးစွာသောအသင်းဖွဲ့စည်းသည်။ ခါးပတ်နှင့်အတူဖြတ်ကျော်ပုံမှန်တုတ်ကျင်းကုတ်အင်္ကျီလုံခြုံတဲ့အလောင်းအစားဖြစ်ပါသည်, သို့သော်သင်ပိုမိုရိုးရှင်းတဲ့အရာတစ်ခုခုကိုပိုနှစ်သက်လျှင်, ဤလိုင်းများပေါ်တွင်သင်မြင်နိုင်ပါသည်တူသော, ကတရားဝင်ပုံစံစတိုင်အသားညှပ်များနှင့်သင်၏အနည်းဆုံးအသွင်အပြင်အတွက်တိုက်ပွဲဖြစ်မည်မဟုတ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတိုင်လ်အမျိုးသားများ » ပုံ » ရေတွင်းများနှင့်အတူကြည့်ရှုသည်